समाचार - कस्तो प्रकारको वातावरण बोटको वृद्धिको लागि एलईडी प्लान्ट लाइट सबैभन्दा उपयुक्त छ?
कस्तो प्रकारको वातावरण बोटको वृद्धिको लागि एलईडी प्लान्ट लाइट सबैभन्दा उपयुक्त छ?
एलईडी प्लान्ट लाइटको तरंगदैर्ध्य बोटको विकास, फूल फुल्ने र फल लाग्नेका लागि धेरै उपयुक्त छ। सामान्यतया, इनडोर बोटबिरुवा र फूलहरू समयको साथ झन् झन् खराब हुँदै जान्छ। मुख्य कारण प्रकाश विकिरणको अभाव हो। बोटको आवश्यक स्पेक्ट्रमको लागि उपयुक्त एलईडी बत्तीले उनीहरूको विकासलाई बढावा दिन सक्दैन, तर फूल फुल्ने अवधि विस्तार गर्न र फूलको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ।
एकातिर ग्रीन हाउसहरू, हरितगृह र अन्य सुविधाहरू जस्तो कृषि उत्पादनमा यो उच्च दक्षता प्रकाश स्रोत प्रणालीको उपयोगले सूर्यको प्रकाशको अभावका कमजोरीहरूलाई सुल्झाउन सक्छ जसले टमाटर, काक्रा र अन्य हरितगृह तरकारीहरूको स्वाद निम्त्याउँछ, र अर्कोतर्फ, यसले जाडो ग्रीन हाउस सोलनम तरकारीहरू पनि उन्नत गर्न सक्छ। यो स्प्रिंग फेस्टिवल वरिपरि सूचीबद्ध गरीनेछ - मौसमको खेतीको उद्देश्य प्राप्त गर्न।
बक नियामक मार्फत एलईडी प्लान्ट लाइट चलाउँदा, एलईडी प्राय: चयनित आउटपुट फिल्टर व्यवस्था अनुसार इन्डक्टरको एसी रिपल वर्तमान र डीसी वर्तमान सञ्चालन गर्दछ। यसले एलईडीमा हालको आरएमएस आयाम मात्र बढाउँदैन, तर यसको पावर खपत पनि बढाउँदछ। यसले जंक्शनको तापमान बढाउन र एलईडीको जीवनमा महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्छ।
जब यो एलईडी टर्न-अन थ्रेशोल्ड भन्दा कम छ (सेतो एलईडीको पालो-अन भोल्टेज थ्रेसोल्ड करिब V.VV छ), अहिले एलईडी पार गर्दै धेरै सानो छ। यो थ्रेसोल्ड माथि, वर्तमान अगाडि भोल्टेज को रूप मा तेजी बढ्छ। यसले एक चेतावनी नोटको साथ श्रृंखलालाई रेसिस्टरको साथ एक भोल्टेज स्रोतको रूपमा एलईडी आकार दिन अनुमति दिन्छ: यो मोडेल एकल कार्य गर्ने DC हालमा मात्र वैध हुन्छ। यदि एलईडी मा डीसी वर्तमान परिवर्तन गर्दछ, तब मोडेलको प्रतिरोध पनि तुरून्त परिवर्तन गर्नुपर्दछ नयाँ अपरेटिंग वर्तमान लाई झल्काउन। एक ठूलो अग्रेषित वर्तमान अन्तर्गत, एलईडीमा शक्ति अपव्ययताले उपकरण तातो पार्दछ, जसले अगाडि भोल्टेज ड्रप र गतिशील प्रतिरोध परिवर्तन गर्दछ। एलईडी प्रतिबन्ध निर्धारित गर्दा यो तातो dissipation वातावरण पूर्ण विचार गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
समायोज्य ब्राइटनेसलाई एलईडी प्लान्ट लाइट चलाउन स्थिर धाराको आवश्यक पर्दछ, र हालको इनपुट भोल्टेजको पर्वाह नगरी स्थिर राख्नुपर्दछ। यो अधिक बिजुलीको लागि ब्याट्रीमा एक इनकन्डेन्सेन्ट बल्ब जडान गर्नु भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ।